विमान दुर्घ’टना भएको ३६ दिनसम्म पाइलट जिउँदै! गोही र सर्प भरिएको जंगलमा कसरी बाँचे ? हेर्नु’होस्.. - Onlinenews Global
June 29, 2021 laxmiLeaveaComment on विमान दुर्घ’टना भएको ३६ दिनसम्म पाइलट जिउँदै! गोही र सर्प भरिएको जंगलमा कसरी बाँचे ? हेर्नु’होस्..
आफू अब बाँ’च्न सक्छु भन्ने महसुस भएको त्यो सम’यबारे स्मरण गर्दै उनले भने ‘त्यतिबेला अपरान्हको साढे ३ वा ४ बजेको थियो ।’ म जंगलमा हिँड्दै थिएँ अनि मैले सेतो पाल देखें । मैले त्यसलाई उठा’एर हेर्दा कटुस राखि’एको टोकरी, केही अन्य औजार र पानी राखिएको देखें । मैले त्यहाँ भएको सानो गोरेटो पच्छ्याएँ र केही पर केही व्यक्तिहरुलाई भेटें जसले बाहिर सन्देश पठाए ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
मुख्यमन्त्री छोड्न तयार छु तर कुनै हालतमा माधव नेपालको पछि लाग्दीन: शाक्य
नेपाली शान्ति सैनिकले कङ्गोको बुदनास्थित शारी नदीमाथिको पुल मर्मत गरेको छ कङ्गोमा शान्ति सैनिकप्रति सकारात्मक भावना